13/02/2018 - Page 2 sur 4 -
Mandray anjara feno amin’ny fiarovana ny tontolo iainana koa ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary Fampivoarana ny Haitao ara-kajy mirindra (MPTDN). Zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana hoy ny minisitra Neypatraiky Rakotomamonjy, satria soa …Tohiny
Famerana ny vidin’entana : Mbola sarotra ny fanaraha-maso
Vaovao ny taona, vaovao ihany koa ny vidin’entana eny an-tsena. Tato anatin’ny herinandro vitsy dia niakatra daholo ny vidin’entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro. Tafiditra amin’izany ny vary, ny siramamy, ny hen’omby, ny legioma sy ny …Tohiny
Antanimora : Gadra iray mbola saika hitsoaka
Ankoatra ireo gadra telolahy tafaporitsaka ny fonjan’Antanimora ny sabotsy alina lasa teo, dia fantatra fa gadra hafa iray indray no tratra teo am-pandosirana ny fonja teny an-toerana omaly antoandro, tokony ho tamin’ny 11 ora. Araka …Tohiny
Andry Rajoelina : Nanomboka ny fampielezan-kevitra
Mahagaga tokoa ny zava-misy eto Madagasikara, satria sasatry ny mitsikera be fahatany fotsiny ihany ireo mpanao politika, hita taratra izao fa ny mpanakiana ihany no manao ny tsy mety. Ny fanokanan’ny filoham-pirenena ireo asa vita …Tohiny
Niteraka fahasimbana goavana teo amin’ny firenena malagasy ny fanonganam-panjakana nataon-dRajoelina Andry tamin’ny taona 2009. Tsy ny krizy ara-politika ihany mantsy no nateraky ny fikatsahana tombontsoa manokana nation-dRajoelina fa nitondra faisana koa ny ara-tsosialy sy ara-toekarenan’i ...Tohiny